Shiinaha warshad cagaaran GN101 / Vridis GN108 iyo soosaarayaasha | Baizan
Telefoonka: 86-0576-83172982 2983
Ford pvb buluug
Pvb buluug khafiifa
Cagaar khafiif ah
Pvb dhexdhexaad dhexdhexaad ah
Caano cad pvb
Ocean buluug pvb
Muraayad buluug buluug ah
Midab khafiif ah T101
Pvb cad oo cad
Rose casaan pvb
Pvb cad oo tarjumaya
Cagaar madow oo cagaar ah pvb cagaaran
Buluug pvb cad
Cagaar on pvb cad
Buluug mugdi ah oo buluug buluug ah kujira
Caddaynta kululaynta PVB
N-UV pnoblastka lonoplast
cagaar fudud GN101 / Vridis GN108
Filinka Baizan midabka pvb ee muraayadda dhismaha
Wax soo saar> 12000t sanadkii
Midab pvb MOQ> 5000 sq.m.
Muddada lacag bixinta: TT LC DP
Adeegga iibka kadib ： Waxaan la socon doonaa natiijada baaritaanka macmiilka, haddii ay dhibaato jirto, waxaan ka hubin doonnaa goobta.
Waxaa la aasaasay 1999, iyada oo loo marayo horumarin sanado badan, Baizan waxay sameysay dhaqan shirkadeed gaar ah oo ay ku jiraan nidaam maareyn adag, horudhac joogto ah, sumcad waarta, qanacsanaanta macaamiisha, iyo siyaasad guul-guul ah. Dhanka kale, waxaan leenahay walaac dhab ah oo ku saabsan horumarka dhaqaalaha adduunka. Sanadihii la soo dhaafay, shirkaddayadu si aad u wanaagsan ayey u horumarisaa oo waxay ku raaxeysataa sumcad wanaagsan oo ka dhex jirta macaamiisheena caagga iyo caagagga, daawada iyo warshadaha ilaha tamarta. Waqtigan xaadirka ah, shirkadeena waxay leedahay seddex saldhig oo wax soo saar oo ku yaal Shanghai, Zhejiang, iyo Chongqing oo leh dhul gebi ahaanba 667 hektar iyo shaqaale 500, 15% ka mid ah waa shaqaale farsamo gaar ah. Baizan wuxuu u hoggaansamayaa mabda'a u janjeedha suuqa iyo macaamilka saaxiibtinnimo. Istaraatiijiyadeena waa inaan si joogto ah u soo bandhigno alaab tayo sare leh, qiimo macquul ah iyo adeeg wanaagsan iibka ka hor iyo ka dib.
● Xirmada Dibadda: Oo ay ku jiraan xirmada kiiska alwaax iyo xirmo sanduuqa cylindrical.
b Qeybta sariirta ee Forklift waxay ka sameysay alwaax cayriin ama alwaax qiiq bilaash ah.
b) Sanduuqa Cylindrical --- Waxaa lagu sameeyay warqad, daboolis alwaax fumigation bilaash ah iyo wareegyo bir ah. Waxaa lagu daabacay "Baizan logo", "PVB Interlayer Film", "Cabbir faahfaahsan, Taariikhda Soosaarka iyo Lambarka Roll", santuuqa alwaax ee kala go'aa wuxuu buuxin karaa afar kartoon.
● Xirmada Gudaha: Filimka PVB waa la kala dhexgalay oo waxaa si buuxda u daboolay isku-darka PE. Duubista waxaa faaruqiyay bacda aluminium. Sumadda aqoonsiga ayaa ku dheggan meel ka baxsan bacda aluminium.
Xaaladaha isticmaalka macaamiisha
Hore: Buni khafiif ah T101 / bunni T108 / bunni T103
Xiga: Caddaan cad M104 / Caano cad M102 / Caddaan cad M101
Dhismaha Filimka Pvb
Buluug cad C101
Buluug madow oo buluug buluug ah BD102
Filimka pvb cadeynta kuleylka
Yaan nahay Ma tahay?
Waxaa la aasaasay 1999, iyada oo loo marayo horumarin sanado badan, Baizan waxay sameysay dhaqan shirkadeed gaar ah oo ay ku jiraan nidaam maareyn adag, horudhac joogto ah, sumcad waarta, qanacsanaanta macaamiisha, iyo siyaasad guul-guul ah. Dhanka kale, waxaan leenahay waxqabad…
No.50 Xiyuan Wadada Zone Keshan West Industrial Zone ， Tiantai ， Zhejiang ， Shiinaha